Home Wararka Doorashada HoP#063 & HoP#011 oo saakay ka billaabatay Baladweyne
Doorashada HoP#063 & HoP#011 oo saakay ka billaabatay Baladweyne
Magaalada Baladweyne xarunta Gobolka Hiiraan ahna Deegaan-Doorashada labaad ee DG Hir-Shabeelle waxaa ka billaabatay Doorashada labo kursi oo tirsigoodu yahay HOP#063 iyo HOP#011 oo ay ku tartamayaan 11 Musharax.
HOP#063 waxaa ku tartamaya 9 musharax oo uu kamid yahay Xildhibaanka Kursigaan ku fadhiya ee Cabdullaahi Goodax Barre oo markale rajeynaya in dib loo doorto, Haweeney & todobo kale oo Rag ah oo qudhooda hami ka qaba kursigaas.
Tartan adag ayaa loo gali doonaa helista HOP#063, Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban Heer Dowlad-Goboleed ee SEIT Hir-Shabeelle ayaa sheegay in 51 Cod musharixii hela uu si toos ah wareegga koowaad ugu guuleysan doono, balse haddii codadka ka yaraadaan wareeg kale loo gudbi doono.
La soco natiijada.
Previous articleAl Shabaab oo sheegatay masuuliyada qarax lagu dilay Ciidamo Itoobiyaan
Next articleSomaliland Upbeat Despite Lack of US Recognition
Hogaamiyayaasha Afrika oo wada dadaalo lagu joojinayo dagaalka Itoobiya